တာတေ ရဲ့ကြိုတ်ကုန်းမလေးငုဝါ – Grab Love Story
ဇတ်လမ်းရှည် ( စ/ဆုံး)
တာမွေဖက်က ကေတီဗွီ တစ်ခုမှာပါ သူငယ်ချင်းတစ်စု သူချင်းသွားဆိုကြတယ် ထုံးစံအတိုင်း ကောင်မလေးတွေ ကိုယ်စီခေါ်ထိုင်ကြတာပေါ့ ။
အီစီကလီတွေ ရိုက်ကြ သီချင်းဆိုကြ ၊ အရက် သောက်ကြနဲ့ ပေါ့တစ်ဆက်ရှင် လောက်ပြည့်တော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ရင်းနှီးသွားကြရော။ အဲဒီမှ သူ့နာမည် ကို မေးကြည့်မိတယ် ။ သူနာမည်က ငုဝါ ။ ဧရာဝတီတိုင်းကတဲ့။ ဟုတ်တာမဟုတ်တာတော့ သူမှ သိမှာပေါ့။ ဒီကလူတွေကလဲ ဗူးကြတာပေါ့။
တစ်ပတ်တစ်ရက် နားရတယ် ၊ အပြင်ထွက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ ။ အပြင်မှာ တွေ့ချင်တယ် ရလား ဆိုတော့ သူက ဖုန်းနံပါတ်တောင်းတယ် ။ ဒါနဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ပေးထားခဲ့ရောဆိုပါတော့။ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းဆိုတော့ ကျနော်တို့ကစနေနေ့တစ်ဝက်ဘယ်သွားရရင်ကောင်းမလဲ ဆို စဉ်းစားနေစဉ်မှာပဲ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဗျာ ဖုန်း သံမြည်လာတယ် ။
မထင်ထားတဲ့ ဖုန်းပါ ။ သေချာတာပေါ့ ငုဝါပါတဲ့ ဒီညနေ မုန့်စားချင်လို့ လိုက်ကျွေးမလားတဲ့ ။ ကျွေးမယ်ဆို လာခေါ်ဆိုပြီး ချိန်းပါလေရော။
ချိန်းတဲ့နေရာမှာသူကိုခေါ် ပြီး ကားလျှောက်မောင်းနေရင်း အခြေနေ အကဲ ခတ်ကြည့်လိုက်တော့ မုန့်စားချင်တယ် ဆိုတာ ညာတာကိုး။ ဒါနဲ့ ကြေးအိုးဆိုင်သွားပြီး ကြေးအိုးကျွေးတယ် ။ ကျွေးပြီးတော့ ဘယ်သွားချင်လဲ ဆိုတော့ မသိသေးဘူး တဲ့ ။ ဒါနဲ့ အကွက်ထဲ ၀င်သလိုဖြစ်လာပြီဆိုတော့ ။
အောက်က ဖွားဖက်တော် က ခေါင်းထောင်ပြီး အချက်ပြတယ်။ ဒါနဲ့ တစ်နေရာကို မ .. သွားဖို့ အကြံထုတ်ရတော့တာပေါ့ ..
ငုဝါရဲ့ပုံစံကို ပြောပြရဦးမယ် .. ဆံပင်က ဂုတ်ဝဲ .. ရွှေအိုရောင် ဟိုက်လိုက် လေးနဲ့ အသားအရည် ပြေပြေပြစ်ပြစ် မျက်နှာဝိုင်းရောင်သမ်း ပြီး နှုတ်ခမ်း ဖူးဖူး လေး က ထူတဲ့ဖက်ကို ယိမ်းပါတယ်။
ငုဝါ ခန္ဓာကိုယ် မှာ စွဲဆောင်မှု အရှိဆုံးကတော့ လှည်တိုင် ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ မကြီးလွန်း မငယ်လွန်း ခန္ဓာ ကိုယ်နှင့် အချိုး အစား ကျနစွာ ရှိနေတဲ့ တောင်ပူစာ ရင်နှစ်မွှာပါ။
ပုရိသတွေ အကြိုက်ဖြစ်တဲ့ တင်က တော့ သိပ်မကြီးလှပါဘူး … ဒီလောက်ဆို ပုံကြမ်းလောက်တော့ သိရောပေါ့နော်…
ကျွန်တော် ထင်ထားတာ တည်းခိုခန်းရောက်ရင် အလုပ်ဖြစ်ဖို့ အတော် ကြိုးစား ရမယ် ထင်ထားတာ တကယ် လက်တွေ့မှာတော့ တက်တက်စင်အောင် လွဲပါလေရော ..။
အရင်ဆုံး ရေချိုးလိုက်ဦးမယ် တဲ့ သူ က ဒါနဲ့ ကျွန်တော် လဲ အတူချိုးရအောင်လေဆိုတော့ မငြင်းဘူးဗျို့…
ရေချိုးခန်းထဲရောက်တာနဲ့ သူ့ကို နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းပါတယ် ။ သူက သွားစိထားသဗျ ။ ကြည့်ဖူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ တော့ သိပ်မတူဘူးဗျာ ။ ကျွန်တော် ထင်ထားတာက လျှာတွေ ရမ်းခါပြီး ကလိကြမယ်ထင်ထားတာ။ ရယ်ချင်စိတ်ကို မနည်းထိမ်းထားရတယ် … ပါးစပ်ကလဲ နှုတ်ခမ်းကို စုပ် လက်က လဲ လှုပ်ရှားရတာပေါ့ဗျာ …
နမ်းနေရင်းနဲ့ ပတ်ထားတဲ့ တဘက် ကို အသာ ချွတ်ချလိုက်တော့ ရင်သား အစုံ က ထင်းကနဲတွေ့ရတာပဲ ..
နို့သီးခေါင်းကလေးတွေကတော့ အတွင်းကို ၀င်နေတယ်ဗျ … လက်ကလေးနဲ့ ကလိ ရင်း ၀င်နေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေး တွေကို ပါးစပ်နဲ့ အားရပါးရ စုပ်တော့တာဗျို့ … ဘယ်ညာ တလှည့်စီပေါ့ဗျာ .. မောလဲ မော .. ကောင်းလဲ ကောင်းပေါ့ … ဘယ်လိုကောင်းလဲ တော့ အသေချာ ရေးမပြတတ်တာ ခွင့်လွှတ်ဗျာ …ပါးစပ်က နို့စို့နေတုန်း ဘယ်လက် က သူ့ ဖွားဖက်တော်လေး ကို အမြောင်းလိုက် လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ကလိပေးနေတာပေါ့ …
အဲဒီမှာ သူ က သိသိသာသာ ကို ဖီးတွေ တက်လာတာဗျ … စစ နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းနေတုန်း က သူရော ကိုရော ထင်သလောက် ခရီးမပေါက် သလောက် နို့စို့ရင်း ..အဖုတ် ကလိတော့မှ သူဟန်မဆောင်နိုင်လောက်အောင် တအင်းအင်း တအဲအဲ ဖြစ်လာတာဗျ … ဒါတင်မကဘူး … ကလိနေတဲ့ လက်ကလေး တွေမှာ … အရည်လေးတွေ ရွှဲလာတယ် … ကျနော်သိလိုက်ပြီ … သူတော်တော် ကောင်းနေပြီဆိုတာ … ဒါနဲ့ သူ့ ခြေတစ်ချောင်းကို အိမ်သာဘိုထိုင်ပေါ် တင်ခိုင်းပြီး ကျနော် ဒူတုပ်ထိုင်ပြီး သူ့ အဖုတ်ကလေး ကို ကျွန်တော် လျာနဲ့ လျက်လိုက်တယ် … စိုစိစိ ချွဲကျိကျိ နဲ့ဗျ … သိပ်ရွှံမနေပါဘူးဗျာ … ပြီးတာနဲ့ သူ့ စောက်စိ လေးကို လျွှာဖျားလေး နဲ့ ကလိပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ သူဘယ်လိုမှ ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ဘဲ .. နံရံကိုတောင် မှီထားရတယ် .. လဲကျသွားမှာ စိုးတယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ…
အဲဒီလို အဖုတ်ကလေးကို မှုတ်လေးတယ်ဆိုရင်ပဲ သူက တော် တော် ကို ဖီးတက်လာတာ ဗျ .. အဖုတ်ကို လျာနဲ့ လျှက် .. အစိကလေးကို မသိမသာလေး မနာအောင်ကိုက်လိုက်ရင်ပဲ သူ့ခမျာ လွန့်လွန့်ကိုလူးနေတာပဲ ဗျို့ ..
စိတ်ကသိကအောက့်ဖြစ်ရတာကတော့ သူ့စောက်မွေးဘုတ်သိုက်ပဲဗျို့ အဖုတ်ကို လျာနဲ့ အသားကုန်ကလိ နေချိန် နားခေါင်း ၀ မှာ ယား သဗျ ..
အဲလို လျာနဲ့ ကလိလိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ အရည် တွေ ထွက်လာတယ်ဗျ.. ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို ဒလဟောတော့ မဟုတ်ဘူး ဗျ .. လျာက သိတယ် ဆိုယုံလောက် ချွဲကျိကျိ နဲ့ ကြက်ဥ အရည်ကြည်လို မျိုးပါပဲ ..
ဒါနဲ့ ကျနော် က ကျွန်တော့် ဖွားဖက်တော် ကို မှုတ်ခိုင်း တော့ သူ က လဲ မငြင်းဘူးဗျ ..
အစပိုင်းမျာ တော့ ထိပ် က လန်နေတဲ့ ဒစ်ရဲရဲလေး ကို မရဲတရဲ့ လျာနဲ့တို့နေတာဗျို့ …
အစမှာတော့ ကျနော် ဘာမှာ သိပ်အရမ်းကြီးဖီးမတက်သေးဘူးဗျ .. ခဏနေတော့ သူက လီးကို ငုံပြီး ဒစ်ကို လျာနဲံ အပီ ကလိ တာဗျို့
ကျနော့် ခန္ဓာကိုယ် လေထဲ မြောက်သွားသလား တောင် ထင်ရပါတယ် ။ သတိထားမိတော့ မျက်လုံးမိတ်ပြီး လက်သီး နှစ်ဖက်တောင် ကျစ်ကျစ် ပါအောင် ဆုပ်ထားမိတယ် ။ သူ့နဖူးလေး လက်နဲ့ သပ်ပြီး ဆံပင်တွေဖယ်ပေးသလိုနဲ့ ကျနော်လဲ ရုပ်ရှင်ထဲကလို ခေါင်းကို ကိုင်ပြီး ပါးစပ်ကို လိုးတော့တာဗျို့ …
သူက ကျွန်တော့် လီးကို တစ်ဝက်လောက်က လက်နဲ့ ကိုင်ထားတော့ ပါးစပ်ထဲကို အကုန်တော့ထည့်မရဘူးဗျ…
ဒါနဲ့ လီးကို ဆုပ်ထားတဲ့ သူ့ လက်ကလေး ကို အသာ ဖယ်ခိုင်းပြီး …နှစ်ချက်သုံးချက်လောက် တစ်ဝက်လောက် ထည့်နေရာကနေ .. အဆုံးထိ ဆတ်ကနဲဆို ထိုးထဲ့လိုက်တော့ ဗျာ .. ဘာပြောကောင်းမလဲ .. သူ အာဂေါင်ထိပြီး ချောင်းတွေ ဆိုးတာဗျို့ … ဆက်မှုတ်ခိုင်းလို့လဲ မရတော့ဘူး .. မနည်းချော့ယူရတယ် ..
ဒါနဲ့ အသာ ကစ်ဆင်လေး ဘာလေးဆွဲ .. နို့ညှစ် ဘာညာ ပြန်လုပ် ပေါ့ဗျာ .. နည်းနည်း အခြေအနေကောင်းမှာ .. သူ့ကို Bath Tab မှာ လက်ထောက်ခိုင်းပြီး ဒေါ့ဂီ စတိုင် ပြင်ရတာဗျို့ … မြန်မာလိုတော့ ခွေးကုန်းကုန်းပြီး ခွေးလိုးလိုး ဖို့ပြင်တယ်ပေါ့ဗျာ .. ရှင်းရော ..
အဲလို Bath Tab ပေါ်မှာ လက်နှစ်ဖက်ထောက်ပြီး နောက်ကို ဖင်ကုန်းသာပေးထားတာ .. သူ့ အဖုတ် ကို မမြင်ရဘူးဗျ .. ဖင်တုန်း နဲ့ ကွယ်နေတာ ..
ဒါနဲ့ လက်တွေဘာလုပ်ဖို့ထားလဲ နော .. ရှာဖွေရေးပော့ဗျာ .. လီးကို လက်နဲ့ ကိုင်ပြိး အဖုတ် အကွဲကြောင်းလေး ထဲ ထိပ်တေ့ပြီး နည်းနည်း အားစိုက်ထိုးလိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ .. လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားရောဆိုပါတော့ …
လီးကလဲ ပိုမာလာတယ်ဗျ … ဟိုင်းဝေးလမ်းပေါ် ရောက်သွားတဲ့ ကားလိုဖြစ်နေတော့တာ .. ကြိုက်သလောက် အရှိန်တင်တော့ ရှေ့မှာ လမ်းဖြောင့်နေပြီဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးဗျို့ ..
ဒါနဲ့ ကျနော်လဲ စစချင်း အတင်း ဖိစောင့်လိုးလို့မဖြစ်ချေဘူး စောနလေး ကမှ အာခေါင်ထိုးမိလို့ သိပ်မကြည်ဖြစ်နေတာကိုးဗျ .. အသာလေး နောက်ကနေ ချော့လိုးလေး လိုးနေရတာဗျ .. လီး ကတော့ တစ်ဝက်လောက်ပဲ ၀င်တယ် ..
၁၀ ချက် ၁၅ ချက်လောက် နေတော့ အခြေနေကောင်းလာတာနဲ့ နောက်ကို အဆုံးနားထိဆုပ်ပြီး အားနဲ့ စောင့်ပေးလိုက်တာ အဆုံးထိ ၀င်သွားရောဗျို့ … ရှေ့မှာ ဘာဂျာဆွဲထားတာရယ် လီးတစ်ဝက်လောက်နဲ့ ချော့လိုးထားတာရယ်ဆိုတော့ .. ချောဆီထည့်ထားပေးသလိုကို ဖြစ်နေတော့တာ .. တကယ်ဖီးပဲဗျို့ သူ့ ခါး ကို ကိုင်ပြီး အားကုန် စောင့်တော့တာ ..အသံကတော့ ပေါင်းစုံထွက်တယ် ..
ပလပ် ပလပ် ဆိုတဲ့ အသံရော
တခါတလေ ဘွတ် ဆိုတဲ့အသံရော
သူ့ညည်းသာတွေရော စုံနေတာပဲ ..
ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ အခုလိုလိုးရင်းနဲ့ နို့ကို လှမ်းကိုင်တာမြင်ဖူးတော့ .. ကျနော် လုပ်ကြည့်တာ .. တယ်သဘောမတွေ့ပါဘူးဗျာ … နို့လှမ်းကိုင်ထားရတော့ စောင့်အားလျော့တယ်ဗျ ..
ကျနော် ကတော့ ဒေါဂီ ပုံစံ ခွေးလိုးဆိုရင်တော့ သူ့ခါးကို ကိုင်ပြီး ဖင်ကို လိပ်တက်သွားအောင် စောင့်လိုးရတာကို သဘောကျ သဗျို့ ..
အကြိုက်ချင်းတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တူမယ်မထင်ပါဘူး …
အဲလို စောင့်စောင့်လိုးပေးနေရင်း စည်းချက်ကျလာတာဗျ ..သူအော်တဲ့ အသံရော
သူ့ဖင်လေး လိမ့်တက်သွားတာရော ပေါ့ ..
သူပြီးချင်လာတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူ့ အဖုတ်ကြွက် သားတွေ က တင်းကျပ် လာတာဗျ ..
သူတင်းလေး အသားကုန်စောင့်လိုးလေ … ပိုတင်းလေ စောင့်လိုးလေ ပဲ .. သိပ်တော့ မကြာဘူး
အဖုတ်ကြောတွေကလဲဗျာ မာထောင်နေအောင်ကို တင်းလာတာ အချက် ၂၀ လောက် စောင့်လိုက်မှ သူ က သက်ပျင်းရှည်ကြီးချပြီး ပျော့ကျသွားတာဗျ ..
ဒါနဲ့ ကိုယ်လဲ ပြီးအောင် စိတ်ကို နှစ်ပြီး အပြီအပြင် ကျုံးပြီး အသားကုန် လိုးရတာပေါ့ဗျာ …
မကြာပါဘူး ကျွန်တော်လဲ ပြီးချင်လာတာပါပဲ ..
ဒါနဲ့ သူ့အဖုတ်ထဲကို လီး ကို အဆုံးထည့်
ဖြည်းဖြည်းချင်း သုတ်ရည်တွေ သူ့ အထဲ ဆတ်ဆတ် ဆိုပြီး ပန်းထည့် လိုက်တော့တာပါပဲ …
ပြီးတော့ သူ့နားသယ်လေးကို နမ်းရင်း … ရေချိုးခန်းထဲက ဒေါ့ဂီ စတိုင်လေး ကို .
ငုဝါနဲ့တာတေ ရဲ့ ရေချိုးခန်းထဲက ဒေါ့ဂီ စတိုင်လေး ကို ပြောပြပြီးတော့ အခု အခါကတော့ အိပ်ယာပေါ်ကဇာတ်လမ်းပေါ့ဗျာ။ တာနေနဲ့ ငုဝါ ရေချိုးပြီးတော့ အလှပြင်ပြီး ဗိုက်စာလာတာနဲ့ ဟိုတယ် က အစားအစာ မှာစားသေးတယ်ဗျ။ ပြီးတော့ အိပ်ချင်လာတာနဲ့ တရေးအိပ်လိုက်သေးတယ် ။ ၂ နာရီလောက်ပဲ အိပ်လိုက်ရပါတယ် ကျွန်တော် စပြီးနိုး တယ်။ ငုဝါကတော့ ဘေးတစ်ဖက်စောင်းပြီး အိပ်နေလေရဲ့ သူလဲ ရေချိုးခန်းထဲမှာ တစ်ချီပြီးထားတာဆိုတော့ အိပ်ကောင်းနေမှာပေါ့။ အိကျီ် ဂါဝန်လေး ရယ် ရွှေအိုရောင် ဆံနွယ်လေးတွေရယ် အနိမ့်အမြင့် ခါးတွေ တင်တွေ နဲ့ ငုဝါရဲ့ ပုံစံလေးကို ဘေးတိုက်ကြည့်ရတာ ရှမ်းတောင်တန်းတွေလိုလို ပဲခိုးရိုးမ ကို အဝေးက ကြည့်ရသလိုပါပဲ ။ ဂါဝန်ရဲ့အောက်မှာတော့ အနက်ရောင် အလက်စတစ် အသားကပ် ဘောင်းဘီ နဲ့ ဆိုတော့ သူ့ ရဲ့ ကောက်ကြောင်းက ထင်းနေပါပဲ ။ ငယ်သွေး တွေ ကြွ ပြီး လှနေတာလဲ ပါပေမပေါ့။
ကျွန်တော် လဲ သူ့နောက်ကနေ အသာ ဖက်ထားပြီး ပူး အိပ်လိုက်ပါတယ် .. လက်တွေက တော့ ထုံးစံအတိုင်း ရင်နှစ်မွှာ ကို ကလိ တာပေါ့ .. ရင်နှစ်မွှာကို ကလိလိုက် .. သူ့ နဖူးပေါ်က ဆံဆလေးတွေကို သပ်တင်ပေးလိုက် နားနောက်နား လေး ကို ဖွဖွ လေး နမ်းလိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ ။
ယား တယ် ကို ရာ .. အသာနေစမ်းပါ .. ငုဝါ အိပ်ဦးမယ် ..တဲ့တကယ်လဲအိပ်ချင်နေပုံပါပဲ ..
ဒါပေမဲ့လဲ တာတေက တော့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ရပ်မပစ်ပါဘူး .. သူ့ဖက် က အင်တင်တင်ဆိုတော့ ကိုယ့်ဖက်က တိုက်စစ်ကို အရှိန်မြှင့်ရမှာပေါ့ ..
ဒီအချိန်မှာ တာတေ ရဲ့ ညီတော်မောင် ဖွားဖက်တော် က တောင် ပြီး မာနေပြီ ဆို တာ ပြောဖို့လို မထင်တော့ပါဘူးနော် .. တာတေရဲ့ ညီတော် မောင် အကြောင်း အနည်းငယ် ပြောပြရဦးမယ် .. ဒီကောင်က တမျိုးဗျ .. တချို့သူတွေရဲ့ ပစ္စည်းဆို တောင် လာရင် ဗိုက်ထိ ကပ်နေ တာမျိုး တွေ့ဖူးတယ် .. တာတေရဲ့ ပစ္စည်းက တော့ ဗိုက်အထိ မကပ်ဘူး … ရှေ့ကို ဖြောင့်တန်းနေတာ … ငယ်ငယ်က ဆို အတွင်းခံ မပါဘဲ ပုဆိုးဝတ်မိရင် လမ်းတစ်ဝက်မှာ စိတ်ထ လာလို့ .. လမ်းလျှောက်တာ ရပ်ပြီး ငုပ်တုပ်ထိုင်နေရဖူးတယ် … ငယ်ရွယ်စဉ်ကတော့ တယ်စိတ်ကြီးတာကိုးဗျ .. နို့ကြီးကြီး မြင်လဲ တောင် .. ဖင်ကြီးကြီးမြင်လဲ တောင် … ပေါင်တံလှလှတွေ့လဲ တောင် … တောင်တောင်တောင် … ပါပဲ ..အဲဗျာ ဇာတ်လမ်းဆက်ကြပါစို့ ကျွန်တော်က လီးထပ်ကလေး နဲ့ သူ့ အသားကပ် လေးကနေ လျှောက်ထိုးနေတာဗျ … ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် .. အဖုတ်ကို မထိပါဘူး ဗျာ ဖင် ပဲ ထိုးမိတာပါ .. အဖုတ်ဆီရောက်အောင်က တော့ ကြိုးရမှာပေါ့ ..
မိန်းခလေးတွေ ဟာ ကာမဗုံး (bomb) တွေ ဆိုတာ မှန်တယ်ဗျ .. သူတို့ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ စနက်တံတွေ အပြည့်ပဲ .. ခင်ဗျား နားသယ်ကို နမ်းပြီး ဖြုတ်မလား .. ကစ်စင် နဲ့ဖြုတ်မလား .. နို့ကို ကလီပြီး ဖြုတ်မလား .. ဖင်ကိုပွတ်ပြီး ဖြုတ်မလား .. ဒူးခေါင်း ပေါင်တံ နမ်းပြ၊ီး ဖြုတ်မလား .. အဖုတ်ကို လျာနဲ့ လျက်ပြီး ဖြုတ်မလား .. သူတို့တစ်ကိုယ်လုံးမှာ စနက်တံတွေကြီးပဲ ..
တာတေလဲ ဟိုစနက်တံ ကလိ ဒီစနက်တံ ကလိ လုပ်လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ ငုဝါ နည်းနည်းလှုပ်လာတယ်ဗျ … လှုပ်မှာပေါ့ ကျွန်တော့် လီးကလဲ သူ့ အဖုတ် ကို ကောင်းကောင်း ကလိနေနိုင်ပြီး နားနောက်ကိုလဲ အဆက်မပြတ်နမ်းနေသေးတယ် … နို့ကိုလဲ ကလိပေးသေးတယ် .. ဘာသားနဲ့ထုထားတာမို့လဲဗျာ .
သူ့ အဖုတ်နဲ့ ကျွန်တော့် လီး ကြားမှာ နေရောင်ထောင်ကြည့်ရင်မြင်ရတဲ့ အလက်စတစ် ဘောင်ဘီ ပါးပါး တစ်ထည် ရှိပါတယ် .. ကျွန်တော်ကံကောင်းသွားတာ က သူ နဲ့ ရေချိုးခန်းမှာ ဗျင်းတုန်းက အတွင်းခံကို သူလျှော်ထားတော့ အလက်စတစ် ကြီးပဲ ၀တ်ထားတာပဲ .. ကျွန်တော် လက်နဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူ အရည်နည်းနည်း ရွမ်းနေပြီ .. ကျွန်တော် လီးနဲ့ အဆက်မပြတ် ကလိပေးတယ်ဆို ရင်ပဲ .. ငုဝါ ဆီက ညည်းသာ တချို့ ညင်ညင်သာသာ စကြားရတယ် ..
တာတေ သိလိုက်ပြီ .. ဒီကွင်းကို ငါပိုင်ပြီ … အပီကန်ဖို့ သာ ပြင်ပေတော့ … စိတ်ထဲမှာ လဲပြော လက်ကလဲ ကြားခံ ဘောင်းဘီပါး ကို ဆွဲချွက်ပြီးသားပဲ .. နောက်က နေ အိပ်လျှက် ချွတ်ရတာဆိုတော့ ဒူး အပေါ်လောက်ပဲ ချွတ်လို့ရတယ်ဗျာ .. ဒါနဲ့ ဘယ်ရမလဲ ခြေမနဲ့ ညှပ်ပြီး ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်တာပေါ့ ..
လက်ကလေးနဲ့ လီးကို ကိုင်ပြီး ဖုတ်အ၀မှာ အနည်းငယ်လမ်းကြောင်းပေးလိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ လမ်းကြောင်းက တည့်သွားပါပြီ …
လှုပ်လို့ ရပြီ … လှုပ်လို့ရပြီ …
လှုပ်တာပေါ့ … သူ့ နောက်ကနေ ကတော့ ထင်သလောက် ကြီး မစောင့်နိုင်ဘူး ဗျ .. သူကတော့ တစ်ချက်ချင်း တစ်ချက်ချင်း အဆုံးထိအောင် ဆွဲထုတ်လိုက် .. ဖြည်းဖြည်းချင်း အရသာ ခံပြီး ပြန်ထိုးသွင်းလိုက် … ဖီး ကို အပြည့် ယူရတာမျိုးကိုဗျ ..
လီးကို အဆုံးထိ နှုတ်ပြီး … ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုးသွင်းလိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ …
အင်း … ဆိုတဲ့ ညည်းသံရှည် လေး နဲ့ ငုဝါရဲ့ ခေါင်းကလေး ဟာ နောက်ကို လန် လန်သွားတာပဲ ..
ဖြည်းဖြည်းချင်း အသွင်းအထုတ် ၃ ချက်လောက် လုပ်လိုက် ခပ်ပြင်းပြင်း တစ်ချက် စောင့်လိုက် နဲ့ ဂစ်တာ ဘိနဲ့ ဆိုရင် Slow Go Go ပေါ့ဗျာ .. ဒူချပ်ချပ် .. ဒူချပ် .. ဒူချပ် .. ပေါ့ ..
အိကနဲ အိ ကနဲ ဇိကနဲ ဇိကနဲ . နဲ့ .. ဖီလင်ကလဲ .. စိမ့် နေတာပဲဗျာ … နည်းနည်းလောက် လှုပ်ပြီးတာနဲ့ ပျင်းလာရောဗျာ ဒါနဲ့ ကျွန်တော် သူ့ကို ဘေးတစ်စောင်းပဲထားပြီး အပေါ်ခြေထောက်ကို ကွေးခိုင်း အောက်ခြေထောင့် အဖြောင့် အတိုင်းထားပြီး အပေါ် ကနေ တက်ပြီး အပီလိုးတာဗျို့ ..
ဒီ position ကတော့ စောင့်လို့ အကောင်းဆုံးပဲ ..ဒေါ့ဂီ စတိုင်လိုပဲ .. လီးကို အဖုတ်ထဲ လဲ အဆုံးထိ ရောက်အောင်ထည့်လို့ ရတယ် .. အားကုန်လဲ စောင့် ..စောင့်ပြိး လိုးလို့ ရတယ် .. တာတေ အတွေ့ အကြုံအရ .. အရပ်ပုတဲ့ ကောင်မလေးတွေဆိုရင်တော့ .. သူတို့တွေ နည်းနည်း နာ တတ်တယ် .. လီးက သားအိမ်ကို သွားသွား ထောက်တာကိုးဗျ .. ငုဝါက တော့ ခံနိုင်အားကောင်းလွန်းပါတယ်ဗျာ ..
အဲ တစ်ခု လိုတာက စပရိန်မွေ့ယာဗျ .. ဘာကောင်းသလားမမေးနဲ့ လူ လဲ သက်သာတယ် စောင့်ချလိုက် ပြန်မြောက်လာလိုက် ..စောင့်ချလိုက် မြောက်လာလိုက်နဲံ
အလိုလိုနေရင်းနဲ့ ကောင်မလေး က အပေးကောင်းသလို ဖြစ်နေတော့တာ ..
အား … အား … ဘွတ် .. ဘွတ် .. အင်း အင်း
ကိုရယ် … အား .. အား ..
စောင့်ပေးပါ ..ကို ရယ် ..
အား ကောင်းလိုက်တာ ကို ရယ် နာနာစောင့်ပေးစမ်းပါ…
ကို ရေ.. အား .. အား
ဆိုပြီး အဆက်မပြတ်အော်နေ တော့တဲံ ငုဝါ ရဲ့ အသံကလဲ ကျွန်တော့်အတွက် စောင့်ဖို့ အားတွေပေးနေသလိုလို ..စိန်ခေါ်နေသလိုလို …ပါပဲ …
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ နည်းနည်းညောင်းလာတယ် .. ဒါနဲ့ အရှိန်လျှော့ ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲထုတ် .. ပက်လက်အိပ်ပေးလိုက်တယ် .. ကျွန်တော် ပြောတယ်နော် ကျွန်တော် လီးက မတ်တတ်နေရင် ရှေ့ကို တန်းနေတာလို့ .. အခု လို ပက်လက်လဲလှန်အိပ်လိုက်ရော .. ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ .. မြင်ယောင်တယ် မို့ လား ..မိုးပေါ်ကို ထောင်နေတာပဲ … ၉၀ ဒီရီ ပဲ .. ငုဝါ ..အင်း …ဘာလဲကို ..
အပေါ်ကနေ နေပေးပါ ..ငုဝါ မနေဖူးဘူး အကို ..
လွယ်ပါတယ် ငုဝါရယ် . .. ထောင်နေတဲ့ ကို့လီးပေါ်ကို တက်ထိုင်လိုက် .. ပြီးရင် ငုဝါရဲ့ အဖုတ် အပေါက်နဲ့ လီးကို တေ့ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုင်ချ လိုက်
ဆိုတော့ ငုဝါ ထလာပြီး ကျွန်တော်ပြောတဲ့ အတိုင်း လိုက်လုပ်ကြည့်တယ် ..
စစချင်း သူ အဖုတ်ဝ ကို လီးတေ့ပြီး ထိုင်ချရမှာ သူ့ပုံစံ ကြည့်ရတာ မဝံ့ မရဲ ..သို့သော် …
တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ လီးဟာ အဖုတ် ထဲကို ၀င်သွားလိုက်တာ လျော ကနဲ့ ရွှတ်ကနဲပဲ .. မြွေတွင်းထဲ မြွေဝင်သွားသလိုပါပဲ ..
ငုဝါလဲ ပထမ တစ်ချက်နှစ်ချက် တော့ မရဲတရဲ နောက်တော့ ရဲလွန်းလို့ ..
ဘွတ်ဘွတ် ဘက်ဘက် အသံတွေကို မပြတ်တော့ဘူး …
ကျွန်တောလဲ ကောင်းလိုက်တာ .. လီး ပုံမှန်တောင့်တင်းနေစေဖို့ အောက်ကနေ ဖင်ရှုံ့ပေးနေရုံပဲ ..
ငုဝါမျက်နှာလေးကို မော့ကြည့်လိုက်တော့ .. မျက်စိကို မှိတ် ခေါင်းကို မောပြီး .. အပေါ်ကနေ စောင့်နေတာ .. စိတ်လို လက်ရ .. အားပါလိုက်တာ .. လေထဲမှာ ဝဲ ပျံနေတဲ့ သူ့ရဲ့ ရွှေရာင် ဟိုက်လိုက် ဆံပင်လေးတွေ က သက်သေပေါ့ ..
ခဏနေတော့ ငုဝါ .. ကျွန်တော့ အပေါ်ကို မှောက်လာတယ် .. အဖုတ်မှာ တော့ လီးတမ်းလမ်းပါပဲ .. ကျွန်တော် သိလိုက်ပြီ .. ဒီတခါ ကျွန်တော် လှုပ်ရမယ့် အလှည့်…
ကိုတွေက အပေါ် က နေပဲ အသားကုန်လိုးခဲ့တာ ..
ဒီတစ်ခါတော့ အောက်ကနေ အထက် ကို ဆန်လိုး ရတော့မှာပေါ့
ကျွန်တော် အောက်ကနေ ခါးကို လှုပ်ကြည့်လိုက်တယ် .. အခြေနေကောင်းတယ် .. ဒါပေမဲ့ဗျာ ..သူ့ခန္ဓာကို ကြီးနဲ့ ဖိထားတော့ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါဘူး ..
ဒါနဲ့ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ သူ့ဖင်ကလေးကို နည်းနည်းမလိုက်တယ် ..
အဲ .. ပြီးတော့မှာ အောက်ကနေ အပေါ်ကို ကော့ကော့ပြီး လိုးတော့တာပဲဗျို့
လိုးလို့ ကောင်းလိုက်တာဗျာ ..
တစ်ချက်ဆိုတစ်ချက် ပဲ ဖောက်ဖောက် ..ဖတ် ဖတ် ကနေနေတာပဲ ..
တစ်ချက်စောင့်ပြီး ကော့လိုးလိုက်ရင် အောက်က နေ ဖောက် ပလောက် ဆိုတဲ့ အသံ ရယ် ငုဝါ ပါစပ်က အားလား အင့် လား မသဲကွဲတဲ့ အသံ ရယ် .. နှစ်ခု ဟာလေ ဟာမိုနီတွေ ကို ဖြစ်လို့ …
ဘေ့ဂစ်တာ တီးရသလိုပဲ တစ်ချက်ဆို တစ်ချက် … အားရလိုက်တာ …
ပလောက် ပလပ် ဘွတ် .ဘွပ် ..
အင်း အင်း အား အား ..
ယား … အား ..
ဆိုပြီး အသံကို စုံနေတာပဲ ..
အခုလို အောက်က နေ့ ပင့်လိုးနေရင်းနဲ့ .. နပမ်းပွဲလို ကျွန်တော်သူ့ကိုအောက်ရောက်သွားအောက်လှိမ့်ပစ်လိုက်တယ် … ကျွန်တော် အပေါ် ရောက်သွားပြီ…
လာထား .. အာဘွား .. တာတေ .. အလှည့် .. တာတေ .. ဘာခေလိမ့်မလဲ … လှေကြီးထိုး ရိုးရိုး .. ဘိုးဘွား အမွေ လိုးနည်းပဲ လေ အား လုံးကျွမ်းပြီးသားပဲ ..အားကုန် စောင့် အားကုန်လိုးရင်း
သူ့အကြောတွေ အကုန်ထောင် ..
သူကအော် ..ကိုယ်ကစောင့် ..
ကိုယ်ကစောင့် သူကအော် …
တစ်ဦးကိုယ် တစ်ဦး တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဖက်ထား ရင်း
သူလဲ ပျော့သွား … လေးငါးချက်လောက် အားကုန်စောင့်ပြီး ကျွန်တော်လဲ .. စစ်ခနဲ့ …စစ်ကနဲ့ … လီးရည် လေးတွေ အဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်
ပြီးတော့ .. ကျင်းစိမ်ပေါ့ဗျာ …ပြီပြီး&&&
ကာမသုခ အပြည့်အ၀ ရကြပါစေ ..